Promo | Codashop Blog MM
PUBG UC ကုိ Codashop ကေန ဘယ္လုိ၀ယ္မလဲ ?
Marjon V - June 4, 2020 0
ေဘာ္ဒါတို႔ရဲ႕ PUBG Mobile အေကာင့္မွာ Unknown Cash (UC) ဝယ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလား ?? PUBG Mobile အတြက္ UC ကို Coda Shop မွ တဆင့္ Redeem Code အသံုးျပဳၿပီး အလြယ္တကူ ဝယ္ယူနိုင္ပါၿပီ ခင္ဗ်ာ။ ပိုၿပီး...
LifeAfter Item Code Promotion
jancodapayment - August 28, 2020 0
Umbrealla ကော်ပိုရေးရှင်းကတော့ နယ်မြေချဲ့ ထွင်လာလိုက်တာ LifeAfter ရဲ့ နယ်မြေနဲ့ Resident Evil နယ်မြေထဲကိုပါရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ပြည့်နေတဲ့ မြေပေါ်ကနေ အသက်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ အခမဲ့ Item ကုဒ်တွေကို Codashop ကနေ ဂိမ်းပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူရင်း...
Tom and Jerry Chase Item code Campaign ပါဝင်ရာတွင်သိရှိရမည့်အချက်များ
jancodapayment - September 9, 2020 0
ဘော်ဒါတို့ရေ "Tom and Jerry Chase" ဂိမ်းလေးကို ကစားရတာ နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်းလေးလာပြီနော်။ အဲဒါလေးကတော့ Codashop ကနေ အနည်းဆုံးစိန်အလုံး ၁၈၀ ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ ၃၀၀၀ ကျပ် ခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဆောင်ကုဒ်တွေကို ရယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ ဖိလစ်ပိုင် ၊ အင်ဒိုနီးရှား...
Mobile Legends မွာ စိန္ေတြ ဘယ္လုိ၀ယ္ၾကမလဲ။
Mobile Legends ကစားတဲ့ ေဘာ္ဒါတုိ႔ေရ ဂိမ္းထဲမွာ စိန္ေတြကုိ ၀ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပါးစပ္ကေန ၁ ၊ ၂၊ ၃ ေအာ္တာထက္ေတာင္ ပုိျမန္ျပီး လြယ္ကူတဲ့နည္းလမ္းရွိတယ္ေနာ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ၀ယ္ယူတဲ့ အခါမွာ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ( credit card...
jancodapayment - August 6, 2020 0
အင်ဒိုနီးရှား ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ မလေးရှား ၊ ထိုင်း ၊ စင်ကာပူ ၊ ကမ္ဘောာဒီးယား ၊ လာအိုနဲ့ မြန်မာပြည်တို့မှာရှိတဲ့ Honkai Impact3ကစားသူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ လေးကတော့ : ၈ လပိုင်း ၇ ရက်နေ့...
အသစ္ထြက္လာတဲ့ Valir ရဲ႕ Skin အသစ္အေၾကာင္း
Valir ရဲ႕ ဒီဇုိင္းအသစ္နဲ႔ "Draconic Flame" Skin ကေတာ့ ေတာက္ပတဲ့ အရွိန္အ၀ါေတြနဲ႔ ထြက္လာပါျပီ။ Valir ဟာသူ႔ ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ မီးေတာက္ေတြနဲ႔ ျပဳိင္ ဘက္ေတြကုိ ျပာေတြအျဖစ္ေလာင္ကြ်မ္းေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အလန္းစား Valir ရဲ႕ Epic Skin...
Mobile Legends ရဲ႕ Twilight Pass ကုိ၀ယ္သုံးရတာ တန္ရဲ႕ လား ။
ေဘာ္ဒါတုိ႔ေရ Mobile Legend ကေန Twilight Pass ကုိအသုံးျပဳရတာတန္တယ္လုိ႔ထင္ရဲ႕ လား ? ဒီလုိေမးခြန္းကေတာ့ Mobile Legends ကစားတဲ့သူေတ္ာေတာ္မ်ားမ်ားေမးတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ Twilight Pass promotion ကေတာ့ အားလုံးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ဟာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ ဘာလုိ႔မသင့္ေတာ္လည္းဆုိတာကုိေတာ့ သင့္အေနနဲ႔...
Starlight Member နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး သိထားသင့္သမ်ွ
Mobile Legends ရဲ႕ Starlight Membership ဆုိတာဘာလဲ ? Mobile Legends's Starlight Membership ဆိုတာ players ေတြရဲ႕ Starlight points တိုးတက္မႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး Reward ေတြ ေပးဖို႕ဖန္တီးထားတဲ့ System တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ML...
Free Fire မွာရွိတဲ့ Elite Pass ဆိုတာ ဘာလဲ
jancodapayment - September 15, 2020 0
Garena ရဲ့ ပဏာမ ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Free Fire မှာ ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံတွေ တိုးတက်လာစေရန် Elite Pass ကို အခုပဲ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဒါက ဂိမ်းကစားသမားတွေ သူတို့အဆင့်တက်လာတာနဲ့ အမျှ အထူးသီးခြား ဆုတွေရယူနိုင်စေမည့် အဆင့်လိုက်အခြေခံ ဆုပေးစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့...
Mobile Legends တွင် MPT ၊ Telenor ၊ Ooreedo နှင့် Mytel သုံး၍...
ဘောက်ချာ – MPT, Ooredoo, Telenor နှင့် Mytel တို့ဖြင့် Free Fire ငွေဖြည့်သွင်းပုံ
သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုဟာ နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။
Free Fire မွာရွိတဲ့ Elite Pass ဆိုတာ ဘာလဲ September 15, 2020
Mobile Legends တွင် MPT ၊ Telenor ၊ Ooreedo နှင့် Mytel သုံး၍ Diamonds စိန် များ ဝယ်ယူထပ်ဖြည့်ခြင်း September 14, 2020
Tom and Jerry Chase Item code Campaign ပါဝင်ရာတွင်သိရှိရမည့်အချက်များ September 9, 2020
ဘောက်ချာ – MPT, Ooredoo, Telenor နှင့် Mytel တို့ဖြင့် Free Fire ငွေဖြည့်သွင်းပုံ September 4, 2020
Wave Money ဖြင့် Free Fire မှာ Diamond တွေ ဝယ်လိုက်ပါ September 4, 2020